သဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့ဆယ်ကျော်သက် | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ: မေတ္တာသည်လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥပဒေ သဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့ဆယ်ကျော်သက်
16 တစ်ခုအောက်တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကများအကြားမည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကြောင်းဒါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဆိုပုံစံမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်များ၏အသက်, ယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ 16 ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောတူညီခကျြ၏အသက်အရွယ်မသက်ဆိုင်ကျားသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏တူညီသောဖြစ်ပါတယ်။
13-15 အသက်လူငယ်များအကြားလိင်ဆက်ဆံခြင်း (လိင်အင်္ဂါ, စအို) နှင့်ခံတွင်းလိင်လည်းပင်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်သည်မှန်လျှင်, offenses နေကြသည်။ တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှကာကွယ်ရေးအတွက်မိတ်ဖက်တစ်ဦး 16 သို့မဟုတ်ကျော်အသက်ခံရဖို့အခြားယုံကြည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လိင်လှုပ်ရှားမှုထိုးဖောက်မှုသို့မဟုတ်ပါးစပ်လိင်ပါဝင်မပါဘူးဆိုရင်တတ်နိုင်သမျှကာကွယ်ရှိပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတစ်ဦးလုလင်လူတစ်ဦး 16 အသက်သို့မဟုတ်ကျော်ခံရဖို့ယုံကြည်သည်နှင့်သူတို့ယခင်ကအလားတူပြစ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးမလာကြပါသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်ထက်နည်းနှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လျှင်ဤရွေ့ကားများမှာ
အဆိုပါစကော့တလန်အစိုးရထံမှလမ်းညွှန်မှု အောက်မှာ-16s အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအမှုကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လူငယ်များနေဆဲမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ထောက်ခံမှုလိုအပ်နေဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။
ဤသည်ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်ပါသည် ဗီဒီယို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ခွင့်ပြုချက်နှင့်ပတ်သက်။ ၎င်းအရေးကြီးသောအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်ဖွင့်နိုင်သည်။ အချို့သူများကလိင်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းသည်မိဘများအတွက်သာဖြစ်သင့်သည်ဟုထင်သော်လည်းကျောင်းများသည်အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏သက်ရောက်မှုနောက်ကွယ်ရှိသိပ္ပံကိုသင်ကြားရန်နေရာတွင်ရှိသည်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်းဤဒေသရှိတိုးတက်မှုများနှင့်လျင်မြန်စွာနေရန်လိုအပ်ပြီး ၄ င်းတို့၏ကလေးများနှင့်လည်းပုံမှန်စကားပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်။ မိဘများသည်မည်သည့်ကလေး၏ဘ ၀ တွင်မဆိုအဓိကရုဏ်းများနှင့်အခွင့်အာဏာရှိသူများဖြစ်သော်လည်းမည်သို့ပင်ပုန်ကန်ကြပုံရသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှခွင့်ပြုချက်အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အကြားတစ်ဦးအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်းလိင်အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အများအပြားအသစ်သောလှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်သူကိုကြည့်ဖို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နေကြသည်။ စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet ကနေတဆင့်ညစ်ညမ်းဖို့ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲနိုင်လူငယ်များလိင်နှင့်အရှိဆုံးမိဘများစက်ဆုတ်ရွံ့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးလမ်းအတွက်စီးပွားဖြစ် porn အဆိုတော်ကနေ '' မေတ္တာ 'နှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ညစ်ညမ်းယနေ့ပျော့ core လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး Playboy-type အမျိုးအစား အတိတ်၏မဂ္ဂဇင်းများ။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု၊ ကျူးကျော်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများသည်အနည်းဆုံးဗီဒီယိုအနည်းဆုံး ၉၀% တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်လူတစ် ဦး နှင့်အမှန်တကယ်မတွေ့ဆုံမီနှစ်ပေါင်းများစွာဤအကြောင်းအရာကိုနေ့စဉ်ကြည့်ခြင်းကဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ၏လုံခြုံမှု၊
မိန်းကလေးများ , လေးစားလိင်ဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ချစ်ခင်ဖို့ပွင့်လင်းကြသည်ခံရဖို့ချင်တယ်။ ဤသည်ကိုသူတို့လိင်ရှိသည်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီမဆိုလိုပါ။ သူတို့ကပဲသူတို့ရဲ့လိင်-တရားစွဲဆိုအလောင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနေကြသည်။ သူတို့အသစ်အရူပနှင့်အပြုအမူကျင့်သုံးခြင်းနှင့်စမ်းသကဲ့သို့, သူတို့ယောက်ျားတွေတစ်ဦးကျီစားနဲ့တူပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်။ နယ်နိမိတ်များနှင့်ချမှတ်ခြင်းအမှားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းဆက်သွယ်ရေးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနေတဲ့သာမန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တဦးတည်း 16 နှစ်အရွယ်မိန်းမငယ်ကဆိုပါတယ်,
"ငါလိုချင်တာတွေမသိရပါဘူး။ ကိုယ့်ငါတခြားလူတိုင်းအကြောင်းပြောနေတာဘာစမ်းချင်နဲ့သူတို့လုပ်နေလုပ်နေပြောပါ ... ကြိုက်တယ်ခံရဖို့ချင်တယ်။ "
သူမသည်သူမနောက်ပိုင်းတွင်နောင်တရခဲ့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များအတွက်တွန်းအားပေးခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသူကပြောသည် သူမသည် slut အဖြစ်အရှက်ကွဲခြင်းကိုခံရဖို့မလိုချင်။ မိန်းကလေးများအနေဖြင့်ယောက်ျားလေးများသည်“ နီးကပ်စွာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထ” လာသည်နှင့်အမျှယောက်ျားလေးကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်“ မယဉ်ကျေး” ဟုထင်မြင်ကြသည်။ အသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီးများသည်မည်သို့အားနည်းချက်ရှိကြောင်းနှင့်မည်သို့လွယ်လွယ်ကူကူအလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းပြတ်သားသောနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရန်မည်သို့လေ့လာရမည်နည်း။
ယောက်ျားလေးများ အခြားတစ်ဖက်တွင်သူတို့တစ်တွေမိတ်ဖက်နှင့်အတူ drive ကိုစမ်းသပ်ချင်သောဤအစွမ်းထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ရှိသည်။ သူတို့ကအစကအခြားယောက်ျား၏မကျြမှောကျ၌စစ်မှန်သောယောက်ျားအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့ချင်တယ်။ သူတို့ဟာအလွန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်နှင့် Single-စိတ်တူကိုယ်တူရှိသူများရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားအုပ်စုသစ္စာရှိမှုများသောအားဖြင့်အများကြီးပိုမိုအားကောင်းမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူနှောင်ကြိုးသို့မဟုတ်စုံတွဲတက်တွဲဖို့အလိုဆန္ဒထက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကပဲလွန်း၎င်းတို့၏ခန္ဒာကိုယ်ထဲတွင်အသစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားကိုထိန်းချုပ်တတ်ဖို့သင်ယူနေကြသည်။ သူတို့ကအစတနာတစ်ဦးကယ့်ကိုမှဖှဘာအကြောင်းကိုစီရင်တော်မူခြင်း၏လေးနက်သောအမှားများကိုအောင်မှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အလောင်းတွေအားကောင်းတဲ့, သတိလစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်ပြမှုများကိုလဲလှယ်စေခြင်းငှါအနေဖြင့်ဒါကြောင့်လူတစ်ဦးချင်းစီ၏စိတ်ကိုအခြားကဲ့သို့တူညီသောအတိုင်းအတာအထိလိင်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုမဆိုလိုပါ။ မဟုတ်သလိုကကြီးစိုးအင်အားစုဖြစ်ပါတယ်, များစွာသောအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစတင်အတွင်းဦးဆောင်သူကယောက်ျားအမြဲဖြစ်ပါတယ်။ သဘောတူညီခကျြ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကိစ္စများ, မုဒိမ်းမှုနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုသီးနှံတက်ကြိုးစားခဲ့နေရာအရပ်ဖြစ်၏။